यौन सम्पर्कका बेला केटीहरुलाई किन दुखाई हुन्छ? » RealPati.com
यौन सम्पर्कका बेला केटीहरुलाई किन दुखाई हुन्छ?
यो विश्वमै युवा अवस्थाबाट गुज्रिरहेका केटीहरुको वास्तविकता हो। चाहे त्यो दक्षिण एशियाको सुदूर गाउँ होस् अथवा लन्डन वा न्युयोर्क जस्तो आधुनिक सहरका बासिन्दा।यौन सम्पर्कका बेला हुने दुखाई एउटा विश्वव्यापी साझा समस्या हो।
विश्वभरि केटीहरुको लवाई खुवाई एवं जीवनशैलीमा भिन्नता भए पनि यो एउटा समान विषय हो– युवा अवस्था प्रवेश गर्दैगर्दा उनीहरु यौन सम्पर्कका दौरान आफूलाई पीडा हुने विश्वास राख्छन्। यौन शिक्षा दिने मुलुकहरुमा उनीहरुले यो विद्यालयबाटै थाहा पाउँछन्। यौन शिक्षाको व्यवस्था नहुने ठाउँहरुमा दिदी, भाउजू तथा आमाहरुबाट सुन्छन्।
यौन सम्पर्कका क्रममा खुन निस्किन सक्छ। यो पनि केटीहरुमा त्रासको रुपमा रहन सक्छ। यो बाहेक ‘सक्सुअल ट्रान्समिसन इन्फेक्सन’को खतरालाई उनीहरुले दिमागमा राखिरहेको हुनसक्छ।
अधिकांश अवस्थामा यौन सम्पर्कलाई लिएर केटीहरुले आफ्नो पार्टनरसँग खुला कुराकानी गर्दैनन्। केटाहरु उत्तेजना र अर्ग्याजमको कुरा गर्छन्। यो कुरा सुनेर केटीहरुको मनमा कैयौं किसिमको त्रास सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले युवा अवस्थाको यौन सम्पर्कले एउटा पक्षलाइ सशंकित पारिरहेछ। पहिलो यौन सम्पर्कमा मात्र होइन कतिपय केटीहरु हरेक पटक आफूलाई पीडा हुनैपर्छ भने जस्तो ठान्छन्।
२४ वर्षीया युवती जेस भन्छिन्, ‘मैले सेक्स अनुभव पूर्व यसबारे जे सुनेकी थिएँ त्यसले निकै तनाब भएथ्यो। म निकै सतर्क थिएँ। अग्र्याजमलाई लिएर म कैयौं मिथहरुले ग्रस्त थिएँ। मलाई जे भनिएको थियो सेक्सका क्रममा ती सबै कुरा दिमागमा खेलिरहेका थिए। मलाई भनिएको थियो कि सेक्सका क्रममा पीडा हुनेछ। नचाहेर पनि यो सब सम्झँदै म यौनक्रियामा सहभागी भएँ।’
युवतीमा यौन सम्पर्कमा हुने दुखाइ उसको पार्टनरसँग निहीत रहने कतिपयको विश्वास छ। ‘मैले सतर्क र शिष्ट पार्टनर छानेँ। उसँग मिलेर यौन सम्पर्ककका कैयौं चिज आफ्नैबारेमा खोजीवन गरेँ। यदि तिम्रो पार्टनर सही छ भने पीडा भन्ने चिज झुठो हो’, जेस भन्छिन्।
युट्युबमा हिजोआज सेक्सबारे छलफल गर्ने धेरै च्यानल छन्। हनाब भिटन युट्युब च्यानलमा सेक्ससम्बन्धी धेरै विषयमा कुराकानी गर्छिन्। यौन सम्पर्कका बेला हुने दुखाइबारे उनी भन्छिन्, ‘कतिपय महिलालाई सेक्सका समयमा दुखाइ हुँदैन। दुखाई सौहार्दपूर्ण सम्पर्कसँग सम्बन्धित छ। हामीलाई सौहार्दपूर्ण यौन सम्पर्क कसरी बनाउने भन्ने थाहा हुँदैन। यो त्यसकै परिणाम हो।’
यो साँचो हो यौन सम्पर्कमा कैयौं स्थिति यस्ता हुन्छन् जो पीडादायक हुन्छन्। यदि यौन सम्पर्कका क्रममा दुखाइ सामना गर्नुपर्छ भने यो गम्भीर समस्या हो। वेलायतको रोयल कलेज अफ अब्स्ट्रिटिशन एन्ड गाइनकोलोजिस्ट (आरसीओजी) प्रवक्ता स्वाती झा भन्छिन्, ‘यौनीमा सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सनका कारण हुनसक्छ। कुनै बेला कन्डम तथा साबुनका कारण पनि दुखाइ हुन सक्छ। यौन सम्पर्कका क्रममा पीडा हुने युवतीले सेक्सुवल हेल्थ क्लिनिकमा सम्पर्क राख्न उनको आग्रह छ।
‘केवल यो केटीहरुको समस्या होइन’
यद्यपि ग्लास्गो विश्वविद्यालयका बरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. क्रिस्टिन मिसेल यौन सम्पर्कमा दुखाईको सम्बन्ध पूर्ण रुपमा मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारणले हुने बताउँछिन्। उनले सन् २०१७ मा एउटा अध्ययन गरेकी थिइन्। उनको अध्ययनले वेलायतमा १६ देखि २४ वर्षका युवतीमध्ये १० प्रतिशतले यौनक्रिडाका क्रममा पीडा भएको उल्लेख गरेका थिए।
उनी भन्छिन्, ‘यदि युवतीहरु आफूले खोजे जस्तो सेक्स गर्न सामथ्र्य हुँदैनन् अथवा मन नलागी करले गर्छन् वा सेक्सका दौरान खुलेर कुराकानी गर्न पाउँदैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा दुखाई हुनसक्छ।’ महिलाहरुमा एक किसिमको पूर्वाग्रह छ कि यौन मनोरञ्जन अधिकार उनीहरुलाई बराबरी छैन वा कम छ भन्ने। कतिपय महिलाहरु त आफू महिला भएकै कारण यौन क्रिडामा दुखाइ भएको स्वीकारेर बस्छन्।
‘सेक्समा असन्तुष्ट रहनुको कारण के हो ?’ भनेर सारा म्याकल्यान्डले अमेरिकामा एउटा अनुसन्धान गरेकी थिइन्। यसमा पुरुषको जवाफ थियो– पार्टनरको उदासीनता। महिलाले भनेका थिए– दुखाइ।
किम लोलियाले पनि यस्तै अनुभवबाट गुज्रेकी थिइन्। अब उनी महिलाबीच यो डरको अन्त्य गर्न काम गरिरहेकी छिन्। उनी अहिले लन्डनस्थित सेक्स एजुकेशन सर्भिसकी संस्थापक हुन्। यो बाहेक उनी एउटा अनलाइन म्यागेजिन पनि प्रकाशित गर्छिन्। उनलाई लाग्छ यौन सम्पर्कका बेला दुखाइ शारीरिक समस्याबाट मात्र हुँदैन। सेक्सका दौरान चुपचाप रहँदा पनि हुन्छ।
उनी भन्छिन्, ‘जब केटीहरूलाई दुखाइ हुन्छ त्यतिबेला उनीहरु चुपचाप सहन्छन्। दुख्न थालेपछि उनीहरुलाई लाग्छ कि आफैँमा समस्या छ। अर्को चाहिँ पार्टनरलाई नराम्रो लाग्ला भनेर उनीहरु त्यो बेला यो सब कुरा भन्न डराउँछन्। सेक्सका समयमा सबै कुरा पारस्परिक हुनुपर्छ। एक अर्काको कुरा सुन्ने तथा महसुस गर्नेगरी यौन सम्पर्क बनाउन जरुरी छ। केवल यो केटीहरुको समस्या होइन।’
संस्थापक अध्यक्ष राइको समर्थन बासु नेपालको प्यानललाई
‘भारत: झुट्टा समाचारमा राष्ट्रवादको हात’
त्रिशूली वाङ्गमय प्रतिष्ठानमा नयाँ कार्यसमिति चयन